Ubhoboka ngokuhlukumezeka othandweni owoKhozi FM - Ilanga News
Home Izindaba Ubhoboka ngokuhlukumezeka othandweni owoKhozi FM
Uthi ubonga uhlelo lwalo msakazo olugcine lwelapha yena
UBONGA uhlelo lwakhe umsakazi woKhozi FM, athi lumsizile wakwazi ukuqunga isibindi waphumela obala mayelana nokuhlukunyezwa, eshaywa kanzima ngowayeyisoka lakhe ngo-2018 kuya ku-2019.
UZandile “Zeal” Dladla oshayela uhlelo oluthi, “Ndabezinhle” kusuka ngo-12h00 phakathi kwamabili kuya ku-03h00 ngoMsombuluko, uthi useqome ukuphumela obala ngendaba yokuhlukunyezwa kwakhe ukuze kusizakale abanye besifazane abasabishe osizini lokuhlukunyezwa ngabesilisa aba-thandana nabo.
Uthi ukwenza lokhu ukuze aba-nye bangakubekezeleli ukuhlukunyezwa ngoba kwesinye isikhathi umuntu uthi uyabekezela, agcine ngokubulawa.
“Lolu hlelo engilwenza emsakazweni lungifundisile ukuthi bani-ngi abantu abahlala ebudlelwaneni okumele ngabe kudala baphuma kubo. Isibindi sokuthi nami nginqume ukuphumela obala ngokuhlukumezeka kwami, ngisithole kulo lolu hlelo ngoba siba nezihambeli ezahlukene, okubalwa kuzo odokotela bezengqondo nabesintu, okungabelaphi bendabuko.
“Ngangihlukunyezwa usuku nosuku kodwa ngingenaso isibindi sokuphuma ebudlelwaneni, kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngibaleke ngethemba lokuthi ngiyaziphephisa kulo mlilo owawungishisa ngoba ngasengisaba nokuthi ngingabulawa nokubulawa, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya kwaze kwaba ngiyanquma ukuphuma,” kusho yena.
Le ntokazi ithi njengoba kuwuLwezi (November) okuyinyanga okuqala ngayo izinsuku eziwu-16 zokulwa nokuhlukunyezwa kwezi-ngane nabesifazane izohambela izindawo ezahlukene, ikhuluma ngokuhlukumezeka kwayo ngenhloso yokusiza abasahlukunyezwa ukuze basibone isidingo sokuphuma ebudlelwaneni obuhlukumezayo.
“Ngizoqala elokishini langakithi eMlazi besengidlulela kwezinye izindawo ezahlukene, ngiyokwethula inkulumo eyakhayo.
“Isifiso sami wukuthi ngiziqhube lezi zingxoxo zize zifike esigabeni sokufundisa amantombazane asemancane ezindaweni za-semakhaya ukuba anake imfundo, angavumi ukuphoqwa ukuba alale nabantu angathandani nabo ngoba kuthiwa ayaganiswa,” kusho yena.
Previous articleAboKhozi bayalwe ukuhlonipha abalaleli
Next articleBasola ukuphekwa komphumela weBafana